Pi-KVM: Tetikasa Switch KVM amin'ny Raspberry Pi | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | | About us, Tambajotra / seriver
Pi-KVM dia karazana programa ary torolàlana manova a vilia Raspberry Pi ho lasa switch IP-KVM miasa tanteraka. Ny tabilao dia mifandray amin'ny seranana HDMI / VGA sy USB an'ny serivera ho an'ny fanaraha-maso lavitra, na inona na inona ny rafitra miasa.
Ity dia afaka mamelona, ​​manidy na mamerina ny serivera, amboary ny BIOS ary avereno atao mihitsy aza ny rafitra fandidiana avy amin'ilay sary naseho, miampy Pi-KVM afaka maka tahaka CD-ROM virtoaly sy flash drive izy io.
1 Momba an'i Pi-KVM
1.1 Fampahalalana fanampiny
Momba an'i Pi-KVM
El miasa rafitra Miorina amin'ny i Pi-KVM ARM Arch Linux ary azo namboarina ho an'ny filàna rehetra.
Raha ny rafitr'i vakiteny ihany ny fisie amin'ny alàlan'ny default. Ary ny rafitra fandidiana dia mihazakazaka amin'ny maody vakiana ihany, toy ny tokony ho rafitra tafapetraka. Manakana ny fahasimban'ny karatra fahatsiarovana izany noho ny tsy fahombiazan'ny herinaratra tampoka.
Ankoatr'izay manome fidirana amin'ny mpizara amin'ny alàlan'ny interface web avy amin'ny navigateur normal na client VNC (tsy misy applet Java na plugins flash) ambanin'ny latency ambany ambany (amin'ny filaharana 100 milliseconds) sy FPS avo. Ho an'izany mampiasa ΜStreamer (voasoratra amin'ny C ary mampiasa MJPG-HTTP).
Etsy ankilany, ny fitendry keyboard sy ny totozy feno (ao anatin'izany ny LED sy scrolling / touch panel scrolling), ny CD-ROM ary ny fakana tahaka ny Flash, dia mamela ny fikirakirana ny zava-drehetra miampy sary marobe azo alaina sy mifandray raha ilaina izany.
Ny fitantanana herinaratra lozisialy dia vita amin'ny alàlan'ny tsimatra ATX amin'ny motherboard na amin'ny alàlan'ny Wake-on-LAN.
Izy io koa dia manana rafitra fahazoan-dàlana maharitra: manomboka amin'ny teny miafina mahazatra ka hatramin'ny fahaizana mampiasa mpizara alalana tokana sy PAM.
Amin'ireo toetra mampiavaka azy:
Cheaper, fa tsara kokoa noho ny vahaolana ara-barotra.
Mora ny manangana: miaraka amin'ny rafitra fiasa vonona hampiasaina izay azo haorina amin'ny alàlan'ny fihazakazahana fotsiny. Ny hardware dia azo atao ao anaty antsasak'adiny ary tsy misy welding.
Ny fanohanan'ny fitaovana lehibe indrindra
Latency ambany be
Fifanarahana an-tranonkala maivana sy marevaka
Keyboard sy totozy
Fitaovana fitehirizana faobe
Fitantanana herinaratra ATX
Fanaraha-maso eo an-toerana
IPMI BMC mifanaraka amin'ny fampidirana amina fotodrafitrasa misy eo amin'ny tamba-jotra.
Fanohanana mafy momba ny fitaovana: Raspberry Pi 2, 3, 4 na ZeroW, ary koa fitaovana fakana sary maro samihafa.
En pocas palabras, azontsika atao ny mamintina ny Pi-KVM ho fitaovana tsotra ary sariaka izany mamela anao hanangana sy hametraka rafi-pandidiana amin'ny tsangambato fahatsiarovana Raspbery Pi miaraka amina baiko roa fotsiny.
Ny mpamorona azy dia mamaritra azy toy ny:
Pi-KVM dia IP-KVM amin'ny Raspberry Pi tena tsotra sy miasa tanteraka izay azonao atao amin'ny tananao manokana. Ity fitaovana ity dia manampy amin'ny fitantanana mpizara na toeram-piasana lavitra, na inona na inona ny rafitry ny rafitra miasa na misy iray napetraka. Azonao atao ny manamboatra olana, manefy ny BIOS, na mametaka ny rafitra fiasa amin'ny alàlan'ny CD-ROM tafiditra na ny modely flash drive.
Ho an'ireo izay liana amin'ity tetikasa ity dia tokony ho fantatrao izany ny isan'ny faritra ilaina, ho fanampin'ny Raspberry Pi, kely indrindra, ahafahana manangona azy ao anatin'ny antsasak'adiny fotsiny ary ny totalin'ny vidiny dia manodidina ny $ 30 ka hatramin'ny $ 100 (miankina amin'ny fametrahana lafo indrindra aza izany) raha IP-KVM manan-tompo tsy manana fampiasa firy kosa dia 500 $ no ho miakatra.
Ny fonosana voafaritra tsara Pi-KVM sy ny kvmd daemon dia soratana amin'ny Python ary nahazo alalana tamin'ny GPLv3.
Ankoatr'izay dia zava-dehibe ny milaza an'izany misy birao fanitarana manokana ho an'ny Raspberry Pi 4 dia eo am-panomanana ihany koa, izay mampihatra ireo fiasa voalaza rehetra, miampy fiasa maro hafa (azonao atao ny mahafantatra ny antsipiriany momba azy ao GitHub).
Ny kaomandy mialoha dia antenaina hisokatra amin'ny faran'ny taona 2020 ity ary ambonin'izany rehetra izany dia antenaina ho manodidina ny $ 100 na latsaka.
Ho an'ireo liana dia afaka misoratra anarana amin'ny mialoha ny filaminana eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Pi-KVM: Tetikasa Switch KVM amin'ny Raspberry Pi
Fitaovana GNU / Linux: Orinasa sy solosaina misy GNU / Linux tsy hita ao anaty boaty